Soomaaliyadii Shariif Xasan! – Kalfadhi
Soomaaliyadii Shariif Xasan!
Waa dhammaadkii 2015. Villa Soomaaliya waxay isu keentay hoggaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo wafdiyo ay wataan si looga hadlo kala guurka.
Villa Somalia waxay wadataa nidaam qornaa nuxurkiisuna yahay in aan 4.5 laga gudbi karin, Puntland iyo Jubbaland waxay wateen nidaam degmo iyo unkidda Aqalka Sare markii ugu horreysay kaas oo sidoo kale degmo lagu qeybinayo.
Xafiisyada UNSOM waxaa buux dhaafiyay qoraallo ka imaanaya odayaasha dhaqanka, dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka socda Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayagoo adkeynaya mowqifka maamul goboleedkooda.
Shariif Xasan madaxa KG oo taageersan 4.5 ayaa Nicholas Kay oo beddel suge ah ayaa sheeko kulamo codsanaya, waxaana la socda guddiga uu u xushay wada hadalka. Dhibka jira ayaa ah, guddiga oo jaakado qurux badan wata, iyo madaxweyna-hoodaba qoraal mowqifkooda laga aqristo lagana doodo kama horeeyo, sidoo kale ma jiro wax cadaadis oo kooxo ayaga taageersan ka imaanaya, xitaa oday dhaqameed. Waa keligiis, waa Shariif keligiis oo lugeynaya oo wata dad aan waxba qorin, waxba aqrin oo haddana wasiirro ah, loona xushay in ay dood nooca kala guurka ah ay la galaan maamullada iyo Villa Somalia.
Qaar ka mid ah wafdiga iyo maamulka ayaa ila soo xiriiray igana codsaday in aan la kulmo, waa dad aan laheyn aragti, ku faraxsan hotelkaas ay deggan yihiin, waxayna af ku difaacayaan 4.5, sababtoo ah madaxweynahooda ayaa taageersan.
Haddii beddel kale keenna la yiraahdo ma hayaan oo 4.5 faa’ido gaar ah kuma qabaan oo aysan maamulada kale ku qabin, balse ayaga afkaar kale ayay wataan! KG waxba ma wadato, 4.5 keliya ayaan difaacaynaa ayadaa noo wanaagsan. Waxaan weydiiyay, ” Haddii 4.5 wax dadkiina iyo Soomaali uga manfac badan aadan ogeyn, weligeed ma jiraysee maxaad sameyn doontaan “.
Waxaan aaday Baydhabo, halkaas waxaan ku arkay rag kale oo wasiirro sheeganaya balse dhammaantood sugaya maalinta uu madaxweynaha imaan doonno. Waa dad aan weligooda iskool dhigan, shaqo micno leh aanan qaban, noloshoodana ku tiirsan tahay wuxuu Shariif siiyo.
Keliya ma aha raggaan, waa dhammaan ragga la shaqeeya. Shariif Xasan waxaa November, 2014 looga dhigay madaxweyne KMG KG, 4 sano waxaa uga dhimman 3 bilood. Marka la weydiiyay maxaad qabatay, wuxuu sheegay in uu “Madaxtooyo sar ah” dhisay, halka markii hore geedaha hoostood lagu shiri jiray.
Ma fahamsanna in shaqada 4 sanno ay ahayd in uu dowladnimo, sharciyo, gundhigga maamul suuban uu dhiso, taas oo ka raqiisan dhisidda daaro. Dhisidda dowladnimose uma baahna fuundiyo, ee waxay u baahan tahay in uu howl geliyo dad aqoon, faham iyo aragti leh, oo aan asagana biil ka sugeyn oo ka madax bannaan dhaqaale ahaan.
Shariif Xasan, bulshada uu ka soo jeedo waxay siiyeen fursado badan oo hoggaamin ah. Hoggaamiyaha waxaa raadkiisa lagu ogaadaa dadka uu soo saaro.
Sheekh Shariif waa mas’uulka soo saaray Farmaajo iyo dad badan oo siyaasadda Soomaaliya hormuud ka ah.
Shariif Xasan qof aan ka liidan wax uma dhiibto, xiddig Soomaaliyeedna ma soo saarin inta uu dowladda dhexe joogay awoodna uu lahaa.
2016-kii wuxuu baarlammaanka Soomaaliya u soo xulay 77 xildhibaan oo labada aqal ah, oo badankooda loogu tala galay in ay baarri amarkiisa yeelo u noqdaan marka ay doorasho jirto iyo marka uu mooshin jiro.
Waxba kama galin 4 sanno ee ay metelayaan shacabkaas dhibaataysan iyo dhaawaca jahligooda iyo dayacacooda ee ay Soomaaliya iyo KG ugu geysan karaan.
Soomaaliya si ay uga gudubto marxaladdaan waxay u baahan tahay dad afkaar leh, ka nadiif ah laaluush iyo maamul xumo. Gobolka ugu nugul Soomaaliya waa KG, uguna baahi badan dadkiisa waxtarka leh.
Ma u malaynayo in la helayo dadkaas inta uu Shariif joogo, waa halis qaran iyo mid gobol, ma laha qaddiyad dhaafsiisan jeebkiisa iyo jagadiisa. Kama tarjumo himillada dhallinta iyo Soomaaliyada mustaqbalka!
Ayadoo uu Sheekh Shariif ka saaray saaxadda 2012-kii, shacabka Baydhabana ay diideen, waxaa 2014 amar madaxtooyo ku soo celiyay Md Xasan Sheekh Maxamuud, oo danno gaaban uu lahaa waxyeello daran ugu geystay shacabka KG.
Waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu qiimeyn doonno madaxweyne Farmaajo haddii uu ogolaado Shariif Xasan in uu ku soo noqdo waddo aan sax ahayn.
Dadbaa i dhahaya, “waa ninka keliya ee Hawiye iyo Darood iska dhicin kara”.
Jawaabtayda waxay tahay, “Hawiye iyo Daarood cadaw ma aha oo iska dhicintooda uma baahan in Shariif la doorta. Hawiye iyo Daarood waxaa iska dhicinaya qofka ka qeyb qaata dadaalka dawo siinta gabadhooda xanuunsan, shaqo siinta dhallintooda jaamacadaha ka baxday, ka amaangeliya qaraxyada, una dhisa dowlad casri ah”.
Haddii maamulka Farmaajo uu gacan siiyo afkaaraha mugdiga ah, taariikhda Soomaaliya ee qormeysa, boggiisa mugdiga ah ayuu ku qormayaa!..
Soomaaliyadii Shariif Xasan socon mayso!
W/Q: Xasan Aadan Hoosoow
Dhaqaale yahan; ahna la taliyaha dhaqaalaha ee wasasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Alberta- Canada.
Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Kala Diray Guud Ahaan Garsoorkii Maamulkaas
Xildhibaanno ka tirsan BFS oo Nairobi kaga qayb galaya Tababar ku saabsan Doorashada Qof iyo Cod